Xildhibaannada laga soo doortay degaannada Koonfur Galbeed oo kulan gaar ah yeelanaya | dayniiile.com
Home WARKII Xildhibaannada laga soo doortay degaannada Koonfur Galbeed oo kulan gaar ah yeelanaya
Xildhibaannada laga soo doortay degaannada Koonfur Galbeed oo kulan gaar ah yeelanaya
Waxaa lagu wadaa in maalmaha soo socda Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay ay kulan gaar ah ku yeeshaan Xildhibaannada labada Aqal ee degaan doorasahdoodu ay tahay Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay.
Xildhibaannada oo qaarkood maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa Magaalada Muqdisho ayaa Maanta dib ugu laabtay Baydhabo kadib markii uu shirka isugu yeeray Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed ( laftagareen).
Xildhibaan Mukhtar Mohamed Guuleed oo kamid ah Xildhibaannada Cusub ee Koonfur Galbeed ayaa sheegay in shirka ay kaga arrinsan doonaan arrimaha xasaasiga ah ee ka taagan dalka & carqaladeyn uu sheegay in si joogto ah loogu haayo doorashooyinka.
Sidoo kale wuxuu sheegay in shirkooda ay kaga hadli doonaan masiirka degaannada Koonfur Galbeed iyo sidii looga hortegi lahaa kuwa diidan horumarka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed, isla markaana shirkooda ay Warmurtiyeed kasoo saari doonaan.
Xildhibaannada degaan doorashadoodu tahay Koonfur Galbeed ee dooran ayaan weli qaadan Shahaadada Xildhibaannimo, kuwaas oo u diiday sababo la xiriira kuraas kamid ah kuwa lagu doortay degaannada Maamulkaas oo la hakiyay.
Previous articleBeesha Caalamka oo saartay war ku saabsan xildhibaanada cusub
Next articleUkraine oo sheegtay in 165 caruur ah lagu dilay duulaanka Ruushka